१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०५:०३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं
गृहलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै चलाउने गरेको छ । बालुवाटारको राजनीतिक नेतृत्वका अगाडि गृहको प्रशासानिक नेतृत्व लम्पसार परेको छ । जसका कारण दुईदुई महिनामा सीडीओ हेरफेर भएका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा परेको छ । सचिव न्यौपानेको कारण गृह प्रशासन पछिल्ले समय झन्झन् बदनाम बन्दै गएको छ । पैसा आउँछ भनेपछि जे गर्न पनि पछि नपर्ने सचिव न्यौपानेका कारण प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर गरिएका कैदीकोहरूको आममाफी विवादास्पद बन्यो । कतिसम्म भने चितवन तरुण दलका अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्यारालाई समेत आममाफी दिइयो । अरू धेरै हत्यारा, बलात्कारीले पनि माफी मिनाहा पाए । आममाफी दिँदा पनि राम्रै रकमको चलखेल भएको बताइन्छ ।
पैसा चलखेलको काम भने जता गए पनि भान्जा सुजन पौडेलले गर्ने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको सचिव हुँदा उनै पौडेलका कारण विवादमा तानिएका न्यौपाने अहिले विगत एक वर्षभन्दा वढी समयदेखि गृह मन्त्रालयको सचिव छन् । अहिले पनि मामाको नाम भजाउँदै रकम संकलनको सबै काम भान्जा सुजनले गर्ने गरेको स्रोतले बतायो । विश्वस्त सूत्रका अनुसार नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरबाट डीएसपी तथा डीएसपीबाट एसपीमा भएका बढुवामा पनि भान्जा सुजनले पैसा उठाएका थिए । सईबाट इन्स्पेक्टर बढुवामा पनि सुजनसँग पैसाको मोलमोलाई टुंगो लागिनसकेकाले ढिलाइ भइरहेको बताइन्छ ।
सचिव न्यौपानेका २७ वर्षीय भान्जाले मामाकोे आडमा धेरैलाई तर्साएर २५औं करोड रुपैयाँ आर्जन गर्नु र यसमा मामा मौन रहनुका कारण उनको नियतमाथि शंका गर्न थालिएको छ । हिजो मामा अख्तियारमा हुँदा अख्तियार देखाएर तर्साउँथे, अहिले गृह देखाएर तर्साउँदै पैसा असुलीलाई निरन्तरता दिइरहेको बताइन्छ । मामा अख्तियारमा सचिव भएको १५ महिनामै उनले ५०औं रोपनी जग्गा जोडेका थिए । काठमाडौं जिल्ला गोकणर्ेश्वर नगरपालिका-३ का नातिराज पौडेलका नाति पुष्कलराज पौडेलका छोरा सुजनसँग आज त्यति धेरै सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर छानबिन गर्ने हो भने त्यो सबै सचिव न्यौपानेको आडमा आर्जन गरेको खुल्ने स्रोतको दाबी छ । मामाको आडमा भान्जा पौडेलले तर्साउँदै घुस असुल्ने र पक्राउ गरिएकाहरूसँग पनि भनेजति रकम दिए बयान कमजोर दिएर विशेष अदालतबाट मुद्दा जिताइदिने भनी मोलमोलाइ गर्दै आएका स्रोतले बतायो । मामा न्यौपाने अख्तियारमा सचिव हुँदा भान्जा सुजनले के-के गरे ? यसबारे यसअघि नै बुधबार साप्ताहिकले तथ्यसहित सामग्री प्रकाशन गरिसकेको छ । केही तथ्य यस्ता छन् ः
घटना नम्बर १ ः २०७५ वैशाख १९ मा नापी कार्यालय साँखु काठमाडौंका प्रमुख नापी अधिकृत भागवत साहलाई अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले पक्राउ गर्‍यो । गोकणर्ेश्वर नगरपालिका-२ स्थित नयाँपाटीमा रहेको ३६ रोपनी जग्गा कित्ताकाट गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग कार्यालय सहयोगी खेमराज भण्डारीमार्फत २ लाख ५० हजार लिएको भन्दै साहलाई कार्यालय परिसरबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
त्यो ३६ रोपनी जग्गा कित्ताकाट गरी २ लाख ५० हजार घुस दिने सेवाग्राही थिए, काठमाडांै जिल्ला गोकणर्ेश्वर नगरपालिका ३ बस्ने सुजन पौडेल । त्यो ३६ रोपनी जग्गा पनि उनकै थियो । अख्यिारकै विज्ञप्तिका अनुसार साह आफैंले घुस लिएका थिएनन् । कार्यालय सहयोगी भण्डारीमार्फत लिन खोजेका थिए । रंगेहात घुस लिँदा लिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरिन्छ । करिब दिउँसोको २ बजेको थियो साह कार्यालयमै थिए । कार्यालयको ढोकामा रहेका भण्डारीलाई पौडेलले पैसा हातमा लगाइदिएपछि साहलाई तत्काल पक्राउ गरिएको थियो ।
घटना नम्बर २ ः २०७५ असोज २१ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्ध काठमाडौंका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) श्यामकुमार राईलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गर्‍यो । सेवाग्राहीबाट सोनी कम्पनीको टिभी खरिदबापत १ लाख ४० हजार घुस लिएको अरोपमा राईलाई पक्राउ गरियो । अहिले राईले सफाइ पाइसकेका छन् ।
सोनी कम्पनी खरिदका लागि १ लाख ४० हजार घुस दिने सेवाग्राही पनि उनै २५ वर्षीय सुजन पौडेल थिए । अख्तियारको विज्ञप्तिमा डीएसपी राईले सेवाग्राहीसँग सोनी कम्पनीको टिभी खरिद गरी ल्याइदिनू भनी जिन्सी सामानका रूपमा घुुस/रिसवत माग गरेको र टिभी आफैंले खरिद गरी ल्याउने र सो खरिद गरेबापतको बिल भुक्तानी दिन सेवाग्राहीलाई पटकपटक फोन गरी घुस मागेको दाबी गरिएको थियो ।
पछिल्लो रेकर्डअनुसार मात्रै साबिक बालुवा गाविस कित्ता नम्बर ३२४ को नक्सा सिट नं. ६, ६ ग, खण्डे नं. को कि.नं. ३७९ नम्बरको जग्गा २०७५ वैशाख २७ मा पास गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा उनी गृह सचिवको भान्जाको तुजुक देखाउँदै उनी प्रहरीका हाकिमहरूसँग बाक्लो हिमचिम र उठबस सक्रिय छन् ।